Chrome 87 inouya pamwe nekuvandudza kwekuita kwataitarisira tese | Linux Vakapindwa muropa
Nezuro, Chipiri, Mbudzi 17, Mozilla yakatanga Firefox 83, chiyeuchidzo chikuru icho, pakati pedzimwe shanduko dzinozivikanwa, chaisanganisira kuvandudza mashandiro. Sezvineiwo, raive zuva rekumhanyisa uye kugadzirisa muzvikamu senge kuzvitonga, nekuti maawa gare gare Google yakakanda Chrome 87 uye chairo gwaro rake rekuburitsa rakanzi 'Iyo inokurumidza Chrome, pane zvese zvaunoda kuti uite«. Sezviri pachena pazasi, ichatibvumidza isu kuti tiite zvese nekukurumidza uye nekureba.
Uye ndeyekuti chimwe chezvinyorwa zvakajairika zve Chrome 87, muchokwadi chekutanga chavanotaura, ndechekuti kushandiswa kweCPU kwakadzikiswa kusvika kuchishanu, izvo zvinoreva kuti hupenyu hwebhatiri huchawedzerwa maawa 1.25. Zvine musoro, izvi ndizvo mhedzisiro yeako "marabhoritari ebvunzo", asi bhatiri rinotarisirwa kugara kwenguva refu kupfuura mukati Chrome 86 uye shanduro dzekare. Pazasi iwe une iyo rondedzero nenhau dzakatanhamara Chrome 87.
Chrome 87 inosimbisa
Iye zvino inoisa pamberi matabvu anoshanda pane zvese zvakavhurika, ichideredza mashandisirwo eCUPU kusvika pa5x uye ichiwedzera kuzvitonga kusvika pa1.25 maawa, zvese zvinoenderana nemayedzo ayo.
Bhurawuza ikozvino rinotanga 25% nekukurumidza, rinotakura mapeji 7% nekukurumidza, uye rinozviita zvese richishandisa shoma RAM.
Pa Android, peji mitoro inenge ingangoita pakarepo kana uchifamba uchidzoka neshure.
Iye zvino unogona kuona runyorwa rweakavhurika matabhu, zvisinei newindo ratiri, uye nyora nekukurumidza kuti uwane iyo yatinoda. Basa racho richagadziriswa kure, kutanga nemaChannelbook.
Iyo URLS bhaa ikozvino inogona kuita zviito, inokurumidza nzira yekuita kuti zvinhu zviitwe nemahwindo mashoma chete. Semuenzaniso, unogona kunyora "edit mapassword" kana "Deleting nhoroondo" kuti uite chiito zvakananga kubva kubhawa. Ini pachangu, chimwe chinhu chandisina kukwanisa kuongorora, kunyange iri mifananidzo yemifananidzo yekuti izvi zvinoshanda sei mukuburitsa chinyorwa.
Kutanga kuitiswa kweMakadhi, ayo anogona kushandiswa, semuenzaniso, pakubika kana kutenga.
Chrome 87 akatoburitswa zviri pamutemo, saka ikozvino inogona kutorwa kubva ku yekuvandudza webhusaiti. Vashandisi varipo vanotove neiyo nyowani vhezheni yakamirira mune software nzvimbo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Chrome 87 inosvika pamwe nekuvandudzwa kwekuita isu tese taitarisira